Nbudata Social Onye Mere Apk maka gam akporo [Pro Editor] - Luso Gamer
N'oge a, a na-ewere ikpo okwu mgbasa ozi ọha na eze dịka isi mmalite ịntanetị kachasị mma. Ebe ndị edebanyere aha na enweghị usoro nwere ike ibipụta ma kwalite azụmahịa ha. Agbanyeghị iji dọta ndị na-ekiri, ọdịnaya pụrụ iche chọrọ. Na-atụle chọrọ anyị wetara Social Onye kere.
N'ụzọ bụ isi, nke a bụ ikpo okwu na-edezi foto n'ịntanetị. Ebe android ọrụ nwere ike mfe mbubata na mbupụ dị iche iche foto media faịlụ ozugbo. Naanị ihe ha chọrọ ime bụ naanị họrọ dashboard mejupụtara. Mgbe nke ahụ gasịrị, bubata foto nke ị dị njikere ịgbanwe.
Wee tinye akwụkwọ mmado dị iche iche, ederede na nzacha dị mkpa iji nye ya ihe pụrụ iche. N'okpuru ebe a, anyị ga-atụle nkọwa ndị ahụ niile na nkenke usoro amamihe maka ndị ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-arọ nrọ mgbe niile ịbụ onye na-eme ihe mgbe ahụ ị ga-etinye nke ọma nke ọma Ngwa ndezi.
Kedu ihe bụ Social Maker Apk
A na-ahụta Android Onye kere Social ka ọ kachasị mma na ntụkwasị obi n'ịntanetị enwere ike iru. Ebe ma aha na random android ọrụ nwere ike mfe Ọdịdị. Gbakwunye gbanwee ndebiri na ọkwa dị iche iche maka akaụntụ mgbasa ozi ọha.
Ọ bụrụ na anyị kwuru gbasara teknụzụ kachasị ọhụrụ maka ịkwalite azụmaahịa yana gụnyere obere ụlọ ọrụ. Mgbe ahụ, ọtụtụ ndị ọkachamara kwenyere na a na-ewere nyiwe mgbasa ozi n'ịntanetị dị ka ebe kachasị mma. Ebe ọtụtụ mmadụ na-eche ikpughe onwe ha na ngwaahịa gị.
Na mbụ, nyiwe ahịa na-agụnye naanị bọọdụ akara na nyiwe mbipụta ọdịnaya ndị ọzọ n'ịntanetị. Dị ka ọwa TV na nyiwe ntụrụndụ ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na atụmatụ ahụ ka na-arụ ọrụ ma na-amị mkpụrụ n'ezie.
Otú ọ dị, ịnweta ebe n'elu ọwa ndị ahụ chọrọ itinye ego puku kwuru puku dollar. Nke ahụ bụ ihe anabataghị nke ọma maka obere ụlọ ọrụ na ịmalite azụmaahịa. Ugbu a azụmahịa ndị dị otú ahụ na-ahọrọ ịhọrọ usoro mgbasa ozi mgbasa ozi maka otu arụmọrụ.
aha Onye na-elekọta mmadụ
Mmepụta nkecha ngwa ụwa
Aha ngwugwu com.socialmedia.socialmediapostmaker
Category Apps - Art & Kere
N'ihi na a na-ewere nyiwe mgbasa ozi ọha na eze jupụtara na ndị mmadụ enweghị usoro. Ndị ahụ nwere ike ịga zụta ngwaahịa na-enweghị oge ọ bụla. Ọzọkwa ịdọta ndị dị otú ahụ chọrọ ihe ngosi dị mma na foto mara mma.
Iji mee nhazi ọkwa dị elu dị otú ahụ na imewe eserese na-achọkwa itinye ego ọtụtụ narị dollar. Ma na-atụle enyemaka ndị mmadụ na imewe dị elu. Ndị mmepe na-eme nke ọma n'iweta ngwa ịntanetị ọhụrụ a.
Ebe ndị otu ahụ nwere ike dezie ngwa ngwa gbakwunyere nhazi atụmatụ ọhụrụ bara ụba na ọdịnaya n'efu. Ọzọkwa, ndị na-eme ọsọ ọsọ nwere ike họrọ ndebiri emebere mbụ arụrụ arụ. Iji rụchaa ọrụ ahụ na oge efu na-emefusịghị ihe onwunwe.
Ọ bụ ezie na ahịa ejupụtalarị na ngwa ndị yiri ya. Ma ọtụtụ n'ime ndị na-eme Social Fake Social Mere mebiri emebi ma dịkwa ize ndụ iji. Yabụ ihe anyị na-akwado ndị fan bụ ibudata ma jiri ụdị ngwa ngwa.
Nke ahụ nwere ike ịnweta site na ebe a site na iji otu pịa nhọrọ. Enwere puku puku ndebiri Instagram na WhatsApp nwere ike ịhọpụta. Ọ bụrụ na ị dị njikere ịmepụta ụfọdụ posts mara mma na statuses wee wụnye Social Maker Download.
Ndebanye aha bụ nhọrọ.
Ọ dịghị ndenye aha a chọrọ.
Mfe iji ma wụnye.
Akụnyere ọtụtụ ngwaọrụ ndezi dị elu dị iche iche.
Ndị ahụ gụnyere ndị na-agbanwe agba, ihe nzacha na ndị ndezi ndị ọzọ.
A na-agbakwunye ndebiri emebebu.
Akụkụ dị mkpa dị iche iche dịkwa maka ịhọrọ.
Ndị ahụ gụnyere ihe mmado, ederede na onyonyo ndabere.
Bọtịnụ òkè ozugbo maka ndị ọrụ.
Ibé akwụkwọ nha dị iche iche dị.
Ọ na-akwado mgbasa ozi ndị ọzọ.
5000 gbakwunyere ndebiri Insta emebere mbụ.
Enwere ike iru ọtụtụ onyonyo n'okirikiri ịhọrọ.
Otu esi ebudata ngwa Social Maker
Ugbu a faịlụ ngwa anyị na-ewepụta ebe a bụ nke izizi. Ọbụna enwere ike ịnweta ya site na Ụlọ Ahịa Play. Agbanyeghị, ọtụtụ ndị ọrụ android na-edebanye aha mkpesa a gbasara nsogbu nnweta n'ihi njehie dị iche iche.
Ya mere na-elekwasị anya nsogbu na enyemaka ndị ọrụ. Anyị na-enyekwa faịlụ Apk ozugbo n'ime ngalaba nbudata. Ọbụna tupu ịnye Apk anyị etinyelarị ya na ngwaọrụ dị iche iche. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị wee pịa njikọ dị n'okpuru ebe a.
Faịlụ ngwa anyị na-ewepụta ebe a bụ nke izizi. Ọbụna tupu ịnye Apk n'ime ngalaba nbudata, anyị etinyelarị ngwa ahụ na ngwaọrụ dị iche iche. Mgbe ị wụnye ngwa ahụ, anyị hụrụ na ọ dị nro ma dị nchebe iji.
A na-ebipụta ma na-ekekọrịta ọtụtụ ngwa ndị ọzọ dị elu. Iji wụnye ma nyochaa faịlụ ngwa ngwa ndị ahụ kachasị mma biko soro URL ndị enyere. Ndị ahụ bụ Nudifier Apk na Foto p.com APK.
Ọ bụrụ na ị na-enwe nnukwu nsogbu a n'ihe gbasara idepụta posts na statuses mara mma. Mgbe ahụ echegbula n'ihi na ebe a anyị na-azụ na Social Maker Apk. Nke ahụ bụ naanị n'efu ịnweta yana achọghị ndenye aha iji.
Categories Art & Kere, Apps Tags Photo Editor, Onye na-elekọta mmadụ, Onye na-eme Social Apk, Ngwa Onye Mere Ọha, Nbudata onye na-eme Social Mail igodo
Nbudata 1v1 Lol Coins Generator Apk maka gam akporo [Egwuregwu agbapụ]